Indawo yokuhlala yaseSitia endala-i-3min yokuhamba ukuya elunxwemeni-AC-WIFI
Indlu esandula ukulungiswa ebekwe kumgangatho we-2 wesakhiwo. Ukuhamba umgama ukuya kunxweme olunentlabathi yaseSitia (kumgama nje oyi-350m) kunye nokhetho lweendawo zokutyela / imivalo/ukuthenga. Inento yangaphakathi eqaqambileyo neyangoku, ibhedi yokumkanikazi, i-AC, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umatshini wokuhlamba, igumbi lokuhlambela elibanzi elineshawari, itafile yokutyela yangaphakathi, ifenitshala yebalcony kunye nombono omkhulu wolwandle. Ukufikelela kwizinyuko.
Le ndlu ikumgangatho we-2 kwisakhiwo sokuhlala kanye kwi-Sitia's port promenade endala.
Lo mhlaba unegumbi lokulala eliphangaleleyo elinebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi kunye nendawo yokugcina abantu ababini, iLCD kamabonakude kunye nedesika ehambelana nelaptop. Indawo yokuhlala inesofa etofotofo, itafile yesidlo sangokuhlwa ephangaleleyo kwaye inika ukufikelela kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo lineshawa kunye nomatshini wokuhlamba.
Ikhitshi ibandakanya zonke izinto zesilivere, izixhobo, isitovu, ioveni, ifriji, imicrowave, umatshini wekofu ohluziweyo kunye netoaster.
Ibalcony inika umbono ongaphazamisekiyo wolwandle kunye ne-port promenade engezantsi. Itafile encinci yamaplanga kunye nezitulo ezi-2 zibonelela ngeyona ndawo ifanelekileyo yesidlo sakusasa esimnandi phambi kokuba uphume uye edolophini okanye kulwandle lwasekhaya.
Indlu imi kumbindi wedolophu yaseSitia, imizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasekhaya kunye nezibuko, iimitha ezingama-20 ukusuka elwandle kunye neemitha ezingama-500 ukusuka kunxweme olulungelelanisiweyo lwesanti. Ezinye iilwandle ezintle zikwimizuzu engama-20-40 yokuqhuba.
***Amagama ambalwa malunga nommandla ***
ISitia yidolophu emi kwimpuma yeKrete, kwisithili saseLasithi. Ilele kwimpuma ye-Aghios Nikolaos nakumantla-mpuma we-Ierapetra. Ilele kwindawo engonakaliswanga lukhenketho oluninzi. Nangexesha lencopho yehlobo exakekileyo, i-Sitia igcina umtsalane othile kunye nesitayile esileleyo. Edolophini kodwa ngakumbi kwiilali zommandla uyakonwabela ukutya okuyinyani kwaseCretan okwenziwe ngeoyile yomnquma esemgangathweni kunye nezinye iimveliso zasekhaya. Emini ungakonwabela ukuqubha kunye nokutshiswa lilanga kulwandle lwaseSitia okanye kwiilwandle ezininzi ezingabanjwanga ezilele ngasempuma kwincam yesiqithi.
***Yintoni omawuyenze eSitia***
Kwimbali kunye nabathandi bezinto zakudala, iSitia's archaeological Museum ibonisa imyuziyam esukela kwixesha leNeolithic kwi3,500 BC ngelixa inqaba yamandulo yaseKazarma, emi phezulu eSitia sisikhumbuzo sexesha elidlulileyo ledolophu. Ngaphaya koko, imyuziyam yemveli ibonisa izinto zenkulungwane edlulileyo ezifana nokuluka, ukucandwa ngamaplanga kunye nezinye izinto zobomi bemihla ngemihla. Ngorhatya ungandwendwela enye yeendawo zokutyela ezincinci ("iRakadika") ezimi ecaleni kwezibuko lokuloba ledolophu, ezibonelela ngeepleyiti ezimnandi ezahlukeneyo kunye nomoya waseCretan "Raki". Kwaye ukuba uphezulu kuyo ungaqhubeka ubusuku bakho kude kube kusasa kwiibhari kunye neeklabhu zasekhaya.
***Kwenziwa ntoni kwingingqi***
*I-Archaeology / Imbali / iNkolo*
Endleleni yakho eya eVai nase-Erimoupoli uya kudlula kwi-monastery yaseToplou. Apha ungandwendwela imyuziyam yeemonki enezinto ezisukela kwixesha lobukumkani base-Ottoman ukuya kuthi ga kwiMfazwe yesibini yeHlabathi. Kwi-Erimoupoli bay ungandwendwela amabhodlo edolophu yakudala yase-Itanos. Ukuya ngasemazantsi mpuma, iZakros yenye yezakhiwo ezine ezinkulu zaseMinoan ezavunjululwa eKrete. Amabhodlo ebhotwe akulindile kumnyango ongezantsi womwonyo waseZakros.
Kwimpuma yeSitia kukho ekuphela kwehlathi lesundu lendalo laseYurophu iVai. Kumgama omfutshane ukusuka eVai kukho ichweba lase-Erimoupoli namabhodlo edolophu yakudala yase-Itanos. Emazantsi-mpuma alo mmandla kukho iilwandle ezinde zesanti kunye namanzi ashushu eKserokambos. Zininzi ezinye iilwandle ezishiyiweyo esingakunceda ukuba uzifumane.
Kubantu abathanda ukusefa emoyeni, ulwandle oludumileyo lweKouremenos lufanele ukundwendwelwa. Iklabhu ibonelela ngokuqesha izixhobo kunye nezifundo. Kubadlali abanzima, i-Faneromeni bay inikezela ngeemeko ezigqwesileyo zamaza (kuxhomekeke kwimozulu). Apha kuya kufuneka uze nekhithi yakho. Iibhayisekile zasentabeni yindlela eyonwabisayo yokuphonononga iindawo zeminquma ezingapheliyo zalo mmandla. Intwasahlobo kunye nokwindla lelona xesha lilungileyo loku kuba imozulu ipholile emini.
Iindawo ezimagqagala zinika imiwonyo emininzi enokuhanjwa ngaphandle kwezixhobo zikhethekileyo. Okokuqala kwaye okuphambili i-4km ye-Richti gorge, kufutshane nelali yase-Mesa Mouliana iya kukumangalisa ngeengxangxasi zonyaka wonke kunye nezityalo ezishinyeneyo ukuya kutsho kunxweme oluyintlango. I-4.5km gorge ye-Zakros iqala kwidolophana yase-Ano Zakros kwaye idibana nolwandle kufuphi nendawo ye-archaeological site yaseKato Zakros. Ngomnye weyona miwonyo inomtsalane eKrete enamacala aphakamileyo kunye nokwakheka kwamatye okumangalisayo. Ikwabizwa ngokuba nguMwonyo wabafi kuba amaMinoan amandulo ayengcwaba abafileyo babo emiqolombeni phezulu emacaleni alo mwonyo. I-3.5km yeChochlakies okanye iKaroumes gorge iphelela kwibhayi entle nekwanti yeKaroumes.
Kwi-Sitia's "Rakadika" kunye neethaveni ezincinci ezisasazeke kwiilali kulo lonke ummandla ungazama, ngaphandle kwenyama yengingqi, kwakhona ezinye izibiliboco zengingqi eziphekwe kwioli yomnquma eveliswe ekuhlaleni, njenge "chochlious" (iintsiba eziphekwe okanye ngetumato okanye iviniga nerosemary. ), "i-omaties" (amathumbu ehagu), "anthous" (i-courgettes egcweleyo) kunye nezinye. Xa undwendwela i-Toplou ungalibali ukubamba i-bite kwi-tavern encinci ye-monastery kwaye uthenge iimveliso ze-organic kwimveliso yezolimo ebanzi ye-monastery (ubusi, i-oyile yomnquma njl njl).
Umncedisi uya kukwamkela kwaye anikezele isitshixo. Sihlala sifumaneka ngeengcebiso ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ngefowuni okanye nge-imeyile.
Inombolo yomthetho: 00000684485